Ihe achọrọ na agụmakwụkwọ ụmụaka | Bezzia
Maria José Roldan | 18/06/2022 12:31 | Na-akụziri ụmụaka ihe
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nne na nna nwere ike iche echiche dị iche. ihe a chọrọ n'ịzụ ụmụaka adịghị mma ma ọlị. Ihe kacha mma bụ iru n'etiti etiti, ọ bụghị oke ma ọ bụ obere.
N'isiokwu na-esonụ, anyị na-akọwapụta obi abụọ niile ị nwere ike inwe banyere ihe achọrọ na agụmakwụkwọ na ka esi etinye ya n'ọrụ.
1 Gịnị bụ ihe a chọrọ maka?
2 Kedu mgbe a na-ewere ihe a chọrọ karịa?
3 Klas ndị nne na nna dịka ihe achọrọ si dị
4 Mgbe ị ga-eme mgbanwe na ịzụ ụmụ
Gịnị bụ ihe a chọrọ maka?
Isi ihe dị na ihe niile bụ ịmara ka esi etinye ihe dị otú ahụ a chọrọ na agụmakwụkwọ nke ụmụntakịrị. N'ozuzu, ihe a chọrọ nwere ike inyere nwatakịrị aka ime ihe n'ụzọ kachasị mma na nke kwesịrị ekwesị. ma mgbe ụfọdụ, ọchịchọ dị otú ahụ nwere ike ime ka nwatakịrị ahụ nwee nrụgide siri ike nke na-emesị mebie ya n'ụzọ mmetụta uche. N'ihi ya, ọ dị ezigbo mkpa ịchọta nguzozi n'ihe achọrọ wee nweta agụmakwụkwọ kacha mma maka ụmụaka.
Kedu mgbe a na-ewere ihe a chọrọ karịa?
Ihe a na-achọsi ike mgbe a na-arụgide nwatakịrị ahụ ma ọ na-enwe mmetụta ọjọọ maka ịghara imezu ihe ndị a tụrụ anya ya. Ihe a chọrọ aghaghị inwe nzube nke ịkụziri nwa ahụ ihe, ọ bụghịkwa ịmanye ya tupu ihe ọ bụla o mee. Ihe ga-esi n'ịkpa oke ihe n'aka ụmụaka bụ ihe ndị a:
Obere nsọpụrụ onwe.
Egwu na egwu nke mmechuihu.
Nsogbu omume na omume.
Nsogbu mmetụta uche.
Nchegbu na nchekasị.
Nsogbu metụtara ụmụaka ndị ọzọ.
ọnọdụ ịda mbà n'obi.
Klas ndị nne na nna dịka ihe achọrọ si dị
Enwere ụdị nne na nna atọ dịka oke ihe a na-arịọ ụmụ ha:
Na mbụ ga-abụ ndị a maara dị ka ndị nne na nna na-agbasi mbọ ike. Ndị nne na nna a na-emekarị ntaramahụhụ ma a bịa n'ịzụ ụmụ ha. Ha na-achịkwa nke ọma ná ndụ ụmụ ha na n'agbanyeghị mmejọ na mmejọ, ha na-enwekarị ndị na-adịghị anabata ihe na ndị na-adịghị agbanwe agbanwe.
Ụdị nne na nna nke abụọ bụ ndị nwere atụmanya dị elu. Ha na-atụ anya ka ụmụ ha rụpụta ezigbo ihe bụ́ ndị na-aghọ ihe a na-apụghị ime eme mgbe ụfọdụ. Ihe a niile pụtara na oke iwe nke ụmụaka dị elu. na-emekarị n'okpuru nrụgide dị elu.
Ụdị nne na nna nke atọ na-elezi anya. Ha bụ ndị na-enyocha ụmụ ha mgbe niile ma na-echebe ha nke ukwuu n'ụzọ na ọ na-esiri ha ike inwe ikike na nnwere onwe ma a bịa n'ihe gbasara ime ihe. Njikwa dị otú ahụ na nchebe karịrị akarị na-enwekarị mmetụta ọjọọ na mmepe mmetụta uche nke ụmụaka.
Mgbe ị ga-eme mgbanwe na ịzụ ụmụ
Mgbe izu ụka rutere, ị ga-ama ka ị ga-adọba ụgbọala chọrọ na soro ụmụaka na-eme mgbanwe karịa.
A naghị atụ aro ihe achọrọ mgbe umuaka di obere.
Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwere mmetụta nke ukwuu Ị ga-enwekwu mgbanwe n'omume gị.
Ọ dịghị ihe na-eme n'ihi na ụmụaka na-emehie ihe. Mmejọ dị mkpa ma a bịa n'ịkụziri ụmụaka ihe.
Ị pụghị ịdị na-akparị mgbe ụmụaka ha na-egwu egwu ma ọ bụ na-ekpori ndụ oge ha n'efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Na-akụziri ụmụaka ihe » Ihe achọrọ na agụmakwụkwọ ụmụaka